के तपाईले थाहा पाउनुभयो एशियन लाइफको ४० करोड २७ लाखको हकप्रदको यो जानकारी ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > के तपाईले थाहा पाउनुभयो एशियन लाइफको ४० करोड २७ लाखको हकप्रदको यो जानकारी ?
के तपाईले थाहा पाउनुभयो एशियन लाइफको ४० करोड २७ लाखको हकप्रदको यो जानकारी ?
काठमाडौ । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले ४० करोड २७ लाख बराबरको हकप्द जारी गर्ने भएको छ । बीमा समितिको निर्देशन अनुसार दुई अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याउने क्रममा रहेको एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले फागुन १३ गतेदेखि ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्रीमा ल्याउन लागेकको हो ।
कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआएबीएल क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीका सेयरधनीले एनआएबीएल क्यापिटल, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका सबै शाखा कार्यालय तथा धितोपत्र बोर्डबाट आस्वा सेवा अनुमति पाएका जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत आवेदन गर्न सक्नेछन् ।
कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित दरका ४० लाख २७ हजार ९६६ कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीको सेयरमा दुई बराबर एकको अनुपातमा आवेदन गर्न सकिने छ । हकप्रद प्रयोजनका लागि कम्पनीले माघ ८ गते शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गरेको थियो ।
बीमा समितिको निर्देशन अनुसार कम्पनीले ०७५ असारसम्ममा चुक्तापूँजी दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्नेछ । तोकिएको पूँजी पुर्याउन कम्पनीले थप सवा ७९ करोड रुपैंया पूँजी बिस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ ।
इन्स्योरेन्सको माघ ७ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहेका कम्पनीका सेयरधनीले मात्र हकप्रद सेयरका लागि आवेदन गर्न पाउनेछन् । उक्त हकप्रदमा आगामी फागुन १३ गतेदेखि चैत्र १८ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको कमाईबाट २० प्रतिशत बोनस बितरण गरि चुक्ता ८० करोड ५५ लाख रुपैंया पुर्याएको इन्स्योरेन्सले ४० करोड २७ लाख रुपैंयाको हकप्रद बिक्री गर्न लागेको हो । उक्त हकप्रद निष्काशन पश्चिात कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब २० करोड ८३ लाख रुपैंया पुग्नेछ ।
२०७४ माघ २३ गते १८:५५ मा प्रकाशित
आधा वर्षमै सत्ताइस अर्ब ७६ करोड बराबरको आइपिओ, एफपिओ, हकप्रद र बोनस सेयरबजारमा
नेप्सेमा थप २ करोड बराबरको सेयर सुचिकृत, हेर्नुहोस् कस्को कती ?
प्रधानमन्त्री मोदीको अध्ययन प्रमाणपत्र नक्कली !
खाद्यान्न बाली ओसारपसार गर्न बडिमालिका ग्राभिटी रोपवे सञ्चालनमा आयो
तपाई तयार हो ? हाईड्रोको ५ करोड ४० लाखको सेयरमा आजमात्रै हो आवेदन दिन पाईने !
DAO Bhojpur issues high alert around Arun River settlement
मिस टिनको फाइनलका लागि ३० युवती छानिए